Nampijaliana tanteraka izy, mandohalika no nahitana ny fatiny, ny 27 desambra teo. Ravarava tanteraka ny vatany. Nakarina ho serzà izy nandritra fanaovam-beloma azy ara-miaramila teo amin’ny RM1 Analakely ny sabotsy teo. “Tao anatin’ny fifanjevoana tamin’ny iraka nampanaovina ny miaramila sy ny zandary no azon’ireo dahalo natao sambobelona izy. Nampijaliana mihitsy izy io izay vao novonoina. Natao ihany ny fanenjehana fa nanjavona izy ireo. Na inona zava-mitranga, tsy maintsy miaro ny vahoaka sy ny fananany ny miramila”, hoy ny Général de divison, Justin Théophile Rakotonirina, lehiben’ny Etamazôron’ny Tafika Malagasy na ny CEMGAM, araka ny tafa ho an’ny mpanao gazety. Ny taona 2016 ity miaramila ity no nahazo ny laharam-boninahitra kaporaly ary nakarina ho “sergent” amin’izao maty am-perinasa izao. “14 taona sy 8 volana ary 26 andro no naha miaramila azy. Tsy nisatry fanahy izy tamin’ny fanompoana ny firenena”. Araka ny voalazan’ireo mpiray dia taminy. Namela kamboty 5 mianadahy sy mpananontena iray izy izao nentina halevina any Betioky Atsimo izao.